Tolo-dalana eny Tsimbazaza: ho mailo amin’ny satan’ny mpanohitra ny Antenimiera | NewsMada
Hanao ahoana ihany ny satan’ny mpanohitra sy ny fanoherana? Ho mailo sy hitandrina ny Antenimierampirenena…
“Mila mailo sy mitandrina tanteraka isika. Satria zava-dehibe loatra izy io eo amin’ny fiainana ara-politika sy demokratika eto amin’ny firenena.” Io ny kabarin’ny filohan’ny Antenimierampirenena, Razanamahasoa Christine, teny Tsimbazaza, omaly, momba ny satan’ny mpanohitra sy ny fanoherana tamin’ny fanombohana ny fivoriana tsy ara-potoan’ny Antenimierampirenena.
Tolo-dalàna avy amin’ny solombavambahoaka izy io, hanitsiana ny andininy sasany amin’ny lalàna lah. 2011-013, tamin’ny 9 septambra 2011. Mametraka andraikitra makadiry amin’ny Antenimierampirenena izany. Hafonja ny adihevitra, ary ny irariany: mba ho adihevitra parlemantera, ka ho tombontsoam-pirenena irery ihany no hanapahan-kevitra.
Tsy afa-misaraka amin’ny rafitra ao amin’ny Antenimierampirenena io lalàna io, araka ny And. 76 Andl 2 amin’ny lalàmpanorenana. Mibaiko amin’izany ny foto-kevitra araka ny soatoavina na ny kolontsaina na ny adihevitra demokratika parlemantera.
Mba ho antsipiriany ny fandaharanasan’ny governemanta
“Fandaharanasa hotanterahina no hovelabelarina, ka ny fangatahan’ny solombavambahoaka: tsara raha somary miditra lalindaliana na amin’ny antsipiriany amin’ireo tetikasa hatao, miaraka amin’ny maridrefy”, hoy izy momba ny fanoloran’ny Praiminisitra ny fandaharanasan’ny governemanta miainga amin’ny politika ankapoben’ny fanjakana (PGE). Hahazoan’ny solombavambahoaka mandrefy ny zava-bitan’ny governemanta izany.Tsara homarihina ny fanombohana ny asa, ny fizotran’izany, ny fe-potoana hanatanterahana izany sy ny tanjona.
Haverina ny hasin’ny Antenimierampirenena
Famerenana ny hasin’ny Antenimierampirenena, fametrahana ny fangaraharana amin’ny amin’ny asa atao, fanajana ireo lalàna sy didim-panjakana ary didim-pitondrana isan-tokony… Ireo no hanatsarana ny fitsipika anatiny mifehy ny Antenimierampirenena. Tsy ambanin-javatra koa ny fitsinjovana ny tamberin’andraikitra amin’ny solombavambahoaka. “Tokony ho hita taratra ao amin’ny fitsipika anatiny tsara ireo foto-kevitra ireo, mibaiko ny solombavambahoaka “, hoy izy.
Haharitra 12 andro ireo fotoam-pivoriana tsy ara-potoana. Raha vita alohan’izany ireo lahadinika telo loha ireo, faranana avy hatrany ny fivoriana.